Ụzọ kachasị dị irè iji ghọọ RHCE akwụkwọ
Olee otú ịghọ RHCE akwụkwọ?
Usoro iji nweta RHCE akwụkwọ
RHCE Na-ege ntị: Mgbe Ị Kwesịrị Ije Maka Ya?
Kedu ihe ị ga - enwe ike ime mgbe ị ghọọ RHCE akwụkwọ?
A RHCE (Red Hat Certified Engineer) asambodo bụ otu kacha chọrọ na ịrịọ usoro sistemụ gburugburu ụwa. A RHCE bụ ezigbo Uhie okpu akwụkwọ nchịkwa System (RHCSA) onye nwere ikike ọzọ na ihe nlele ndị a chọrọ iji mee ka onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ anya dị elu. Onye RHCE kwenyesiri ike na ya na-elekọta ọrụ na Red Hat Enterprise Linux na-elekọta ma na-arụ ọrụ usoro mgbasa ozi Linux nke okike okpu. Usoro a bụ n'efu ma na-emeghe isi ugbu a. Ọ bụ n'ụzọ dị otú a na-enweghị ihe ijuanya na inweta akwụkwọ ikikere RHCE ka a na-ele anya dị ka mgbanwe ndị ọkachamara IT nwere. Echiche ndị ọkachamara na-eme ka obi sie gị ike ma nwee nnukwu afọ ojuju. N'agbanyeghị eziokwu ahụ, iji nweta RHCE pụtara na ọ bụ RHCSA ka ejiri mee ihe mbụ. Kedu otu esi eme ka RHCE kwadoro?
Tupu ị nweta akwụkwọ ikikere RHCE, onye ọ bụla aghaghị ịkwado RHCSA nkwenye. Ọzụzụ a na-enye gị kwesịrị ịdabere na nhazi oge gị. Ndị isi nke Windows ahụ bụ ndị kacha nta na Linux ga-aga maka nkuzi Red Hat System Administration I na II (RH124 na RH134) na usoro Red Hat System Administration III (RH254) iji kwadebe maka nyocha. Ọ bụrụ na ọ bụghị nsogbu dị ukwuu, gụọ akwụkwọ ndị dị n'okpuru:
Windows sistemụ ndị nwere ntakịrị Linux zutere:
Ndị nlekọta Linux ma ọ bụ UNIX nwere 1 na 3 afọ ahụmahụ:
Ị nwere ike idozi n'ọnọdụ ọ bụla ọzụzụ nke dị mma maka ịchọrọ - klas, na weebụ, ma ọ bụ na ibe weebụ gị. E nwere ọtụtụ ntọala na-enye ọzụzụ ọzụzụ RHCSA na ọkwa ndị ọzọ na-aga nke ọma.
Ndị RHCSA ahụ kwadoro ndị ọkachamara bụ ndị nwere ike ịchọta ikike dị elu nke na-eburu n'uche na njedebe mgbaru ọsọ ịmepụta ozi ha ga-aga nyocha RHCE. Ị nwekwara ike ịme ka RHCE hụ na ị bụ onye isi ogo usoro ụlọ ọrụ ọ dịbeghị ka ekwenyebeghị. Tụkwasị na nke a, n 'ohere na ị mechara RHCE Rapid Track Course ma ọ bụ ndị gụchara Nchịkwa I, II, na III.
Iji mezue akwụkwọ ikikere RHCE, onye ga-etinye 3.5 hour RHCE Exam (EX300) maka Linux 7. Na ohere nke na RHCE kwenyere na ọ dị mkpa iji nwetaghachi ma ọ bụ na ohere ọ bụla na onye ọ bụla chọrọ isonye na nnyocha nyocha nke ụlọ tupu ị nyochaa RHCE, ị ga-aga maka ụlọ ọrụ RHCE Certification (RH299). Nke a bụ ụbọchị anọ dị mma nke otu onye nkuzi na-eme ka ị nweta ezumike iji rụọ ọrụ site na ụlọ ọrụ ọ bụla site na nkuzi Red Hat System Administration I, II na III, yana usoro Rapid Track.
Dika okpu okpu okpu, dika ihe di nkpa bu ihe obula RHCE nwere ike inwe ihe nke RHCSA mere ka odi ya nma. N'agbanyeghị nke a, ha ga-enwe ike ịtọọ ndị na-agba ọsọ oge; dozie ọmụmụ ihe dị iche iche, ịmepụta nkewa, ma hazie nkọwa nkọwa; ịmepụta ma kpughee ihe ndekọ banyere iji usoro; nhazi usoro ihe eji eme ihe, tinyere ngwa ntinye anya; hazie (iSCSI) onye nhazi; jiri akwukwo edere iji mechie usoro nkwado nke oru na imeputa usoro inye usoro ochichi dika HTTP / HTTPS, FTP, NFS, SMB na ndi ozo.
Tinyere usoro ndị a, otu ga-abụ RHCSA meela nkwa tupu ị nweta RHCE nkwenye dị ka akwụkwọ RHCSA na ọzụzụ RHCSA na-ahazi maka iwuli elu ihe kpatara ikike ndị a na-atụ anya ka ha rụọ ọrụ Uhie okpu. Iji nweta RHCE akwadoro na-egosi ọrụ dị egwu na-esi na ya pụta na nkwenye ụlọ ọrụ. N'agbanyeghị eziokwu ahụ, ị ​​kwesịrị ị na-ewere usoro nke Okpu Uhie kpughere n'elu iji nweta asambodo ahụ. Ị kwesịrị ịgafe ule ole na ole iji kwado onwe gị na-eburu n'uche na ị ga-anwale akwụkwọ nyocha maka RHCE.
RHCSA Ntụle Atụmatụ - Olee otú ị gafere RHCSA nyocha?
Kedu ihe bụ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) | Oke uhie uhie